FIKATSOAN’NY FAMPIANARANA : Mitebiteby ny tsy hisian’ny fanadinana ireo ray aman-dreny
Manoloana ny fitakiana ataon’ ireo mpampianatra manerana ny Nosy dia mitebiteby fatratra amin’izao fotoana izao ny ankabeazan’ireo ray aman-dreny. 7 juin 2018
Atahoran’izy ireo sao tsy hotanterahina intsony ny fanadinana raha toa ka mbola mitohy izao fitokonana lavareny izao. Marihana mantsy fa efa miha akaiky izao ny fotoana hanaovana ny fanadinana ka izany indrindra no mampanahy ny rehetra. Na hotanterahina ihany koa aza dia tsy maintsy inoana marimarina fa mety ho ratsy ny voka-panadinana noho ny tsy fianarana fotoana marobe.
Ho an’i Mahajanga manokana izao dia nanapa-kevitra ny ao amin’ny Cisco fa hahemotra amin’ny fotoana tsy fantatra aloha ny fanadinana Cepe andrana izay saika hatao ny 12 jona ho avy izao ary tsy mbola voatapaka akory aza ny andro hanemorana azy. Manahy ny mety haha-taona fotsy ity taom-pianarana ity ireto farany raha mbola mitohy ny fahatapatapahan’ny fampianarana tahaka izao.
Raha tsiahivina kely dia nanomboka tany amin’ny fotoanan’ny pesta no efa voatohintohina ny fianaran’ny mpianatra. Any amin’ireo mpitolona ho an’ny fanovana no miandrandra vahaolana goavana ny rehetra, izay efa hita fa efa miha mandroso any amin’ny fandresena.